5 Jimicsiyada Yoga iyo Yoga ka dhanka ah Soocelinta dhabarka
5 jimicsi yoga ah oo loogu talagalay adkeynta dhabarka
01 / 08 / 2016 /0 Comments/i tayada Articles, Jimicsiga iyo Jimicsiga/av waxyeelladayda
Ma waxaad dhib ku qabtaa adkaanta dhabarka? Halkan waxaa ah 5 Jimicsi Yoga ah oo kaa caawin kara inaad kordhiso dhaqdhaqaaqa dhabarkaaga oo aad yareyso adkaanta adkaanta. Xor baad u tahay inaad la wadaagto qof qaba xanuunka dhabarka.
Jimicsiyada yoga iyo yoga waxay waxtar yeelan karaan markay tahay nasashada muruqyada adag iyo murqaha. Intooda badan badiyaa nolosheenna wax aad u badan ayaa waxay sababtaa muruqyada dhabarka, sinta, dhabarka bowdooyinka iyo kursiga inay aad u adkaadaan. Fidinta joogtada ahi waxay noqon kartaa cabiraad wanaagsan oo looga hortago murqaha adkaanta iyo kala goysyada adag. Waxaan kugula talineynaa in laylisyadaas si wada jir ah loo sameeyo jimicsiyadaan xoogga ah ee sinta og Dhabarkooda awoodda ugu badan.
1. Marjariasana Bitilasana (Jimicsiga geela Bisadaha)
3. Urdhvamukhasvanasana (Booska eyga qiimeeya)
5. Adho Mukha Svanasana (Booska eey hoos udhaca)
Istaag afarta lugood ka dibna kursiga si tartiib ah kor ugu qaad saqafka - illaa aad ka gaarto booska sawirka. Ku hay jagada qiyaastii 30-60 ilbiriqsi (ama intaad awooddo) ka dibna si tartiib ah mar labaad hoos ugu dhig dhulka. Layligu wuxuu u hawlgaliyaa qaabdhismeedka saxda ah iyo muruqyada ku hareeraysan garbaha si wanaagsan. Ku celi in ka badan 4-5 nooc.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/adho-mukha-svanasana.jpg?media=1648573622 463 700 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-08-01 10:18:262022-03-18 17:26:545 jimicsi yoga ah oo loogu talagalay adkeynta dhabarka
ARDAYGA: Xiriirka Ka dhexeeya Bakteeriyada La wadaago iyo Caymiska Dareenka Gluten: Saynisyahannada ayaa Sababay Biyoolaji